KnightOS: inoshanda sisitimu yekuverenga | Linux Vakapindwa muropa
KnightOS: inoshanda sisitimu yekuverenga
Kune akawanda mapurojekiti asingazivikanwe nevanhu vazhinji ayo anonyanya kunakidza. Semuenzaniso, iwe unogona kunge wakafungidzira kuti iyo inoshanda sisitimu inogona kumhanyisa pane yakapfava karukureta. Iyo Hardware yeaya macomputer madhizaina ishoma, iine yakapusa processor, uye zvishoma memory. Asi zvakakwana kumhanya inoshanda senge KnightOS.
Weird? Zvakanaka, kana tikatarisa kumashure kunhoroondo yekomputa, zvinogona kuoneka kuti michina yekutanga yekomputa, enhoroondo makomputa, zvaive zvisiri zvinopfuura macalculator ane zviyero zvakakura kwazvo kuti vakwanise kuita kuverenga kwakaomarara kana kujekesa mamwe mameseji sezvaakange achishandiswa. MuHondo Yenyika Yechipiri. Zvishoma nezvishoma ivo vakashanduka kumhanyisa zvirongwa zvemberi uye zvakasiyana kusvika zvazviri nhasi ...
Muchokwadi, kana iwe uchirangarira kwakatangira kweIntel, yekutanga yezvokutengeserana microprocessor, iyo Intel 4004, yakanga isina kuitirwa komputa, asi karukureta kubva kukambani yekuJapan Busicom. Naizvozvo, karukureta haisi kure kure nekombuta yazvino, kunyangwe zviwanikwa zvehurongwa uye kugona kwechipiri kuri kwakakwirira kupfuura kwekutanga.
Zvandiri kuedza kukuudza ndizvo kana uchida kuyedzaIwe unogona kufarira kuyedza neyako Calculator uye KnightOS, kuti inogona kupa yechipiri hupenyu kune icho chigadzirwa icho chaunenge watokanganwa uye kuisa mudhirowa. Kana iwe uchifarira, iwe unogona kuwana ruzivo uye kurodha pasi chirongwa ichi kubva kune yako website yepamutemo.
1 Chii chinonzi KnightOS?
1.1 Inoenderana macalculator
1.2 Shandira pamwe ne KnightOS
2 Matanho ekumisikidza iyo yekushandisa sisitimu
Chii chinonzi KnightOS?
KnightOS ndeye yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu yeTexas Instruments macalculator. Unogona kuzviwana zvese mune sosi kodhi kuti uone magadzirirwo acho uye kuumbiridza, kana kunanga mbichana kuti ukwanise kuimhanya pane yako Calculator. Iyo ine MIT rezinesi, saka unogona kuigadzirisa kana uchida uye nekuigovera.
KnightOS inounza nhanho nyowani yekushandisa uye kugadzirisa kwechigadzirwa chakatemerwa zvakanyanya kubva kufekitori kungoita kuverenga. Saka iwe unenge uine mamwe mabasa kuti ukwanise kutamba navo, kuwana iyo faira nzvimbo, kurodha zvitsva zvinoshandiswa, isa yekuwedzera software pane yako Calculator nekuda kwayo yakapusa package maneja, nezvimwe. Zvese zvakasikwa zvevabati.
Kana iwe ukashamisika kana yako Casio, yako HP, nezvimwe, zvinoenderana, chokwadi ndechekuti ivo havasi. Izvo hazvishande pane ese macalculator. Muchokwadi, sekutaura kwandatove ndaratidza, ndezve chete zve Texas Instruments. Aya maTI akavakirwa pane inozivikanwa Zilog Z80 microprocessor, CPU iyo ino sisitimu yekushandisa yakagadziridzwa.
Naizvozvo, akatsigira TI karukureta shanduro Ndizvo:
TI-83 + Sirivhi Shanduro
TI-84 Sirivha Edtion
TI-84 + Ruvara Sirivha Shanduro.
Mamwe maFrance macalculator ayo ari akasiyana TI.
Iwe unogona zvakare kumhanya nayo kuburikidza ne emulator.
Shandira pamwe ne KnightOS
Si unoda here kubatana neprojekti KnightOS yekuwedzera kuwedzera yako IT CalculatorInofanira kuwedzerwa kuti kune nharaunda yakatenderedza chirongwa ichi uye ivo vari kuramba vachivandudza nekuvandudza ino sisitimu kuti ikure. Uye iwe unogona kutora chikamu nekunyora zvinyorwa, zvinyorwa, kushandura, kana kuronga.
Matanho ekumisikidza iyo yekushandisa sisitimu
Ita nhanho idzi nokungwarira uye kuziva zvauri kuita. Kana iwe uchikahadzika, zvirinani usazviita kana iwe unogona kusiya macalculator ako asina basa.
Kana iwe ukafunga kushandisa iyo KnightOS sosi kodhi panzvimbo yeiyo bhanari, iwe uchafanirwa kuzvinyora iwe pachako Kuti uite izvi, unofanirwa kurodha pasi iyo SDK yakapihwa neiyi purojekiti, wobva waumbiridza sezvakaratidzwa paGitHub kune karukureta yauinayo ...
Kana iwe uchinetseka nezve iyo KnightOS yekumisikidza maitiro pane yako IT, iwe unofanirwa kuita anotevera matanho:
Iwe unofanirwa kuve neanoshanda system Microsoft Windows, Apple macOS, kana GNU / Linux distro, kana FreeBSD.
Mune komputa yako OS unofanira kuisa TI-Batanidza o TiLP. Neimwe yezvirongwa izvi iwe unozokwanisa kugonesa kubatana kweako TI karukureta nePC yako ku gonesa kuendesa ye data rinodikanwa kuisirwa KnightOS. MuLinux, haina GUI, saka iwe uchafanirwa kuzviita kubva kunyaradzo, nepo mune mamwe maviri masystem anoshanda iri yakati wandei. Zvakare, paLinux iwe unofanirwa kuitisa iyo ...
Chinhu chinotevera kuongorora iyo boot kodhi vhezheni kubva kuTI Calculator yako. Izvo zvakakosha kuti uzive charger yauinayo. Unogona kuitarisa pane iyo TI-OS, nekudzvanya bhatani reMODE, ipapo Alpha + S uye bvunzo inotanga. Ichakuratidza yako vhezheni pachiratidziri. Kana iwe uine vhezheni 1.02 kana kupfuura iwe unofanirwa kuenderera sekutsanangura kwandinoita, asi kana iri yazvino vhezheni iwe ungangodaro uchafanirwa kuverenga iro bhuku kuti uone mamwe matanho aungade kuita. Semuenzaniso, kune 1.03 ungangoda kubaya kodhi kodhi pamberi, kana kushandisa UOSRECV
Iye zvino bvisa bhatiri kubva pane chako Calculator. Kana iri TI-84 + unofanirwa kudzvanya bhatani rekumisazve pane kubvisa bhatiri.
Uye nebhatiri rabviswa, batanidza karukureta nePC yako.
Chengeta akabata bhatani reDEL uye kudzorera bhatiri rawakabvisa uye kusunungura DEL.
Uye zvino unogona gadza iyo inoshanda sisitimu kana kuigadziridza. Kuti uite izvi, unogona kusarudza ku:
Shandisa iyo TI-Unganidza chishandiso pamwe chete neTI OS Downloader.
Shandisa TiLP neGUI ye macOS uye Windows.
Shandisa TiLP mune yayo vhezheni vhezheni paLinux. Mune ino kesi, iwe unongofanirwa kumhanyisa rairo "tilp -n /path/where/you/KnightOS.8xu" isina makotesheni uye neropafadzo, ndiko kuti, semudzi kana nesudo pamberi payo.
Iye zvino mirira kuti ipedze kuisirwa.
Bvisa tambo kubatana kwePC uye yako Calculator.
Press bhatani ON kubva pane yako Calculator uye uchave uine KnightOS.
Kana iwe usingade chimwe chinhu chechimwe chinhu, hachishande chaizvo, kana iwe uchida kudzoreredza yako IT yazvino inoshanda system, ndokuti, dzokera kuTI-OSUnogona kuzviita nekukodha TI-OS uye nekutevera iwo iwo mairairo sekuisa KngithOS, asi zvisinei neshanduro yekodhi yebhoti mune iyi kesi, nekuti zvingave zvakafanana kune vese. Kuti uzo kurodha TI-OS Unogona kuenda kune yepamutemo Texas Instruments webhusaiti muchikamu chino, zadza fomu uye kurodha pasi kodhi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » KnightOS: inoshanda sisitimu yekuverenga
Iwe waisa pikicha neyekare Ti-Nspire, iyo haina kuenderana. Ive nekuchenjerera neye texas zviridzwa desktop application yeTi-Nspire CX CAS. Akandiitira gadziriso nekuti ini ndaisaziva kuti ndaive ndakabatana, ndisina kupihwa chero saiti kuti ndibvume, kana kubaya, kana chero chinhu uye ini ndabuda kunze kweiyo ndless (chero ane Ti-Nspire anoziva zvandiri kutaura nezvazvo, kunyanya kugona kushandisa Homebrew software). Kuti ndiwedzere kutsanangudza, akaisiira kwandiri sepepa rehuremu uye mushure memasikati tinkering inoshanda zvakare asi ine dhamu yekuvandudza uye isina ndless.
Mhoro Cristian, ndave kuda kutenga iyo Calculator, iwe undiudze kuti chii ichocho nezve ndless
ndless http://ndless.me/ Iwo maaraibhurari asina kufanira epurogiramu kunyorera muC / C ++ yekarikuta. Ivo vakanaka kwazvo uye vanotibvumidza isu kuita zvinhu zvinonakidza kwazvo. Asi hazvisi zvepamutemo uye kugona kuzvishandisa, sekune nhare mbozha, iwe unofanirwa "kudzika" karukureta, saka kutaura uye unondinzwisisa, kunyange zvisina kufanana. Asi iyo yazvino vhezheni yeNdless inogona kungoiswa chete kana Calculator yako ikasapfuura vhidhiyo 4.5.0 yeiyo inoshanda sisitimu. Uye usazvigadzirise pamusoro peiyi izvozvi, kubva pa4.5.0 kuenda kune inotevera hapana kana shanduko dzinonzwisisika.
Dambudziko riri kupi? Rimwe zuva ini ndakagadzirisa iyo texas desktop application inova mufananidzo weiyo Calculator uye inoshanda kubata zvimwe zvishoma zvimwe zvinhu. Uye ivo vanozivikanwa kuve vaisanganisira chimwe chinhu icho chinongoisa choga kugadzirisa. Nekuti ini ndakagadziriswa kuenda ku4.5.2.8 uye ndakarasikirwa nesimba rekushandisa Ndless. Ine p …… ado nekuti ini ndaishandisa zvimwe zvekukurumidza izvo zvandisingakwanise kushandisa izvozvi uye ndakazvisiya mudhirowa.
Calculator yakanaka kwazvo pachayo yekushandisa kuyunivhesiti, ndakaitenga pandakanga ndiri kuyunivhesiti. Panguva iyoyo vanonditendera kuti ndiishandise muzvidzidzo zvese kunze kwekunge, zvine musoro, muCalculus neAlgebra zvidzidzo zvekirasi yekutanga (izvo zvino zvichazodaidzwa nezvirongwa zvitsva, zvakakosha zvekutsvaga mabhora epingi, kukwira mugomo, pasi pe zambuko, uchidya sangweji ye ham uye wozviwedzera zvese, ini na II, uye ichave iri mwedzi mina, iine maawa mana pasvondo kuti usashungurudze chero munhu uye munhu wese anotendera)
Asi kunze kwemajusi chishandiso chakanaka chebasa uye inogara iri yeCAS modhi. Iyo Ti-nspire CX CAS yakanaka software uye kesi inoenderana asi isiri yekutsvinya pamusoro, iyo HP Prime ine yakanaka kwazvo inopedza asi nharaunda yayo haina kundikurudzira. Saka zvese zviri kunze uko zvinotenderera zviri pamutemo uye zviri pamutemo iyo HP Prime emulator inoenda newinehq, nekuitarisa haurasikirwe nechinhu uye ndosarudzo yaunofunga. Imwe yevaviri ichave yakanaka kwazvo kutenga.
Hi Cristian, ndinokutendai zvikuru neruzivo, ndinosiririsa sei chirongwa muC / C ++, ndine chokwadi chekuti ndless inobatsira kwazvo, ndiri kutarisawo kosio kirasi cp400.
Ndine hpprime apk pahwendefa asi ndichaona zvekutenga.
Ndinokutendai nemafungiro enyu, ini ndinobatsira kwazvo.
Winget: iyo Windows 10 APT iyo yatinogona kuisa software kubva kune iyo terminal
Edge Chromium yeLinux inoonekwa paMicrosoft Vaka 2020